DARYEELKA XANNAANADA BEERTA - SOOSAARKA DALAGGA
Hibiscus waa warshad reer Malvaceae ah. Waxaa aad u jecel yahay growers, maxaa yeelay dhammaan noocyada kala duwan ee warshad this Bloom aad u quruxsan. Ubaxyada Hibiscus, xataa gudaha noocyada isku midka ah, waa mid kala duwan. In ka badan 200 nooc iyo qiyaastii 500 nooc oo warshadaan ah ayaa loo yaqaan.
Ma taqaanaa? Muuqaalka muuqaalka ah ee dhammaan hibiscus - nolosha gaaban ee ubaxa. Ubax kasta wuxuu ku noolyahay hal maalin - subaxdii ayuu furan yahay oo wuxuu fiidkii galaa.
Dhinaca kale, saddex nooc oo hibiscus waa caadi. Mid ka mid ah ayaa ka soo jeeda gudaha gudaha waxaana lagu yaqaanaa sida Shiinaha u kacay. Hibiscus Shiinaha waxaa lagu fulin karaa xagaaga ee beerta, laakiin weli waxaa loo tixgeliyaa guri ah. Laba nooc oo kale ee hibiscus waa beerta.
In jardiinooyinka koonfurta of Russia, Ukraine iyo Crimean mid ka mid ah inta badan ka heli kartaa hibiscus Suuriya, kaas oo sidoo kale loo yaqaan geed-sida. Waa geedo ubax ah oo gaari kara 3 mitir oo dherer ah. Badanaa, jirridda waxaa laga sameeyaa iyada, taas oo keentay geed geed qurux badan. Iyada oo leh beerashada aad u dhow ee noocyo dhowr ah, waxaad abuuri kartaa geed shtamb leh midabo kala duwan ka beerta hibiscus.
Hibiscus Tree waa perennial. Hal meel waxay ku kori kartaa ilaa 10 sano. Waxay ku duugmaysaa laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar. Ubax ee hibiscus Suuriya waxay noqon kartaa mid fudud iyo Terry, ee midabo kala duwan, laakiin ma weyn. Laakiin ee nooca labaad beerta hibiscus, hibiscus caws, dhexroorka ubaxu gaadho 26 cm. Hibiscus ceelka waxaa sidoo kale loo yaqaanay swamp.
Waa muhiim! Hibiscus waxaa lagu kala diri karaa qeybta labaad ee bisha May, sidaa daraadeed ha ku degdegin inaad ku fekerto in uu qabow yahay, isla markiina iska tuur geedka. Hibiscus Grassy waa baraf badan u adkaysta, waxay ku kori kartaa ma aha oo keliya koonfurta, laakiin sidoo kale in dhul duurka. Waxaa sidoo kale ku dhex mari jiilaalka leh caleenta qalalan ama digada qalalan.
Noocyada dhirta ayaa sidoo kale aad u kala duwan. Dhererka wuxuu ku kala duwan yahay 80 cm ilaa 2 m, iyo ubaxyadu leeyihiin noocyo kala duwan oo ah midabyo. Geedku wuxuu si wanaagsan u koraa meel hal meel ah, laakiin 5 sano kadib wuxuu u baahan yahay beer qafiif ah meelo kale beerta. Waxay dhacdaa qeybta labaad ee bisha Maajo. Waxyaabahaani way ka dillaacaan dhammaadka Juun ilaa horraantii Sebtembar Suudaanta kor u kacday, rosilla, ama hibiscus sabdariff, waxay ka timaaddaa Hindiya, beeraheeda waxaa lagu dhaqaa dhammaan meelaha kuleylka ah. Laga soo bilaabo nooca hibiscus waxaa loo sameeyey karkade cabitaanka, halkaas oo tufaax casaan mugdi, calyxes iyo ubax ayaa loo isticmaalaa, waxaa lagu magacaabaa dhoobo. Dhammaan qaybaha geedka this, marka laga reebo xididada, waa la cuni karaa. Warshadda waxaa lagu kori karaa guriga dhaqanka dheriga, miraha si fudud ayaa loo heli karaa baqshiinka shaaha karkade.
Daryeelka Xannaanada Beerta
Hibiscus beerta - dhirta aan qabin, laakiin for ubax badan waxay u baahan yihiin qorrax iyo waraabiyo dhexdhexaad ah. Waxay sameyn karaan hooska shaqada furan, halka ubaxa noqon doono midabyo badan oo buuxa. Marka ubaxyada hibiscus abaari dhaco, iyo marka ciidda la qoyay, geedka ayaa laga yaabaa. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la quudiyo hibiscus leh Bacriminta potash-fosfooraska ee guga iyo xagaaga. Hibiscus waxaa lagu saari karaa caarada caarada ama noocyada kale ee dulin, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad kormeerto xaaladda xaaladda warshadeeda.
Soo saarista hibiscus
Hibiscus waxay siyaabo kala duwan u soo saari kartaa:
• kala qaybinta baadiyaha;
Hibiscus Suuriya waxaa ugu wanaagsan oo lagu faafiyo by gooyn, halka aad isticmaali kartaa digaagga kaas oo weli ku tumanaya baadiyaha. Gooyn 15-20 cm dheer dhigay biyaha. Roots ayaa muuqanaya 2-3 toddobaad kadib. Markaas guntooda waxaa lagu beeray dheriyo leh carrada fudud.
Beeray dhulka ku xiga sanadka soo socda. Hibiscus Grassy waa ugu fiican ee la faafiyo by qaybta baadiyaha ee guga, marka caleemaha koraan 10-15 cm U foori by by gooyn, dhirayn iyo kala qaybinta baadiyaha u damaanad qaadaya of hantida varietal ee warshadda. Labada nooc ee hibiscus waxaa lagu faafin karo by abuur. Hibiscus koritaanka abuurka ah ee guriga at waa mid fudud aad u fudud. Seeds waxaa laga iibsan karaa dukaanka ama waxay ka soo qaadaan sanduuqyada beeraha duurka ee agagaarkaaga marka ay qaan gaadhaan.
Laakiin leh is-goosashada of abuur ah, mid ma filan karaa warshad si ay u koraan, sida waalid. Qaar badan oo ka mid ah beeralayda ayaa si gaar ah u rusheeyaa ubaxyo hibiscus kala duwan si ay u helaan noocyo cusub. Si aad u hesho biqilka ka fiican, waxaad abuuri kartaa abuurka qaboojiyaha muddo 2 toddobaad ah oo ka sareeya eber. Waxaa lagu beeray dherer shimbir ah. Beeray dhulka ku xiga sanadka soo socda. Laga soo bilaabo geed geed hibiscus Bloom karaa kaliya ee sannadka afraad, iyo cawska ayaa Bloom in labaad.
Geedka hibiscus la gooyey guga hore. Tani waxaa la sameeyaa si loo soo saaro laamaha qalalan iyo jaban, si ay u siiyaan dhirta qaab qaab qurux badan ama u siiyaan ubax badan. Ubaxyo Hibiscus muuqan on caleemaha ee sanadka hadda, sidaas darteed si loo kordhiyo tirada ubax, Hibiscus Syriac waa la gooyaa ka hor bilowga xagaaga. Geedku wuxuu si fiican uga jawaabaa manjooyin isla markaana si dhakhso ah u koraa. Dabcan, manjooyin badan ayaa lagu dabaqi karaa hibiscus Syriac, laakiin hibiscus cows ayaa sidoo kale la dumin karaa. Haddii noocyada kala duwan ee hibiscus sida aad u sarreeya, ka dibna waxaa laga gooyaa karaa dhererka aad u baahan tahay. Xaaladdan oo kale, hibiscus caleemaha caleemaha dhinaca, ka dhiga jirid qaro weyn. Laakiin ubaxyada on caleemaha dhinaca ee hibiscus cows ayaa aad u yar ka kuwa kuwa on asliga ah.
Sida loo daboolo hibiscus beerta jiilaalka
Hibiscus Tree waa diidan yahay dhaxan. Hibiscus hibiscus ee dhulka u furan yahay suuragal ah halka heerkulka hawada qabow inta badan jiilaalka ka badan yahay -20 ° C. Burburkii hibiscus waa nooca jiilaalka leh caleenta qalalan, jir waa la diiriyo laamood ama sheyga waxaa lagu daboolay agrotex ama lutrasil. Laakiin kuleylaha noocan oo kale ahi waxay halis u yihiin muuqaalka jiirka jilicsan ee qashinka ama xafaayadda xafaayadda ee jilicsan. Haddii uu geedka yar yahay, waxaa lagu beddeli karaa tuubada oo lagu dhejiyaa qolka hoose ama qolka kale ee qabow ilaa guga.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, gooyaa hibiscus cawska si height ah 10-15 cm, ka dibna si aad u ogaato dhab ah meesha xididkiisa waa. Maaddaama ay kor u kacdo xilliga guga, waxaad ku burburin kartaa asalkeeda inta lagu jiro beerta hore ee beerta. Hibiscus hospiscus waxaadna heli doontaa jawi farxad leh beerta xagaaga oo dhan.